Coral Reef: ချစ်သူနှင့်တွေ့ဆုံခြင်း
Moe Cho Thinn said on July 22, 2010 at 4:19 AM
စန္ဒကူး said on July 22, 2010 at 7:10 AM
၆နှစ်ကျော်ပီ..anniversary တင်မဟုတ်ဘူး.. လတိုင်း ၈ ရက်နေ့ရောက်တိုင်း month-sary လို့ခေါ်ပီး..ချစ်သူစဖြစ်တဲ့နေ့ကို အမှတ်တရနေ့အဖြစ်နှစ်ယောက်သား ကျင်းပတုန်းဘဲ. anniversary ကတော့ အထူးနေ့ပေါ့..
လတိုင်း ၈ ရက်နေ့ရောက်တိုင်း သူအရင်မေးသလို ကိုယ်ကလဲ အလစ်မေးတတ်တယ်.. သူမသိချင်ယောင်ဆောင်နေရင် ကိုယ်စိတ်ကောက်တယ်။ ကိုယ်မေ့နေရင် (သူအရင်စပြောတာစောင့်နေတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်)း))
နေ၀သန် said on July 22, 2010 at 8:11 AM
သက်ဝေ said on July 22, 2010 at 8:26 AM
ကြည်နူးစရာကောင်းတဲ့ တွေ့ဆုံမှုလေးတခု စတင်ခဲ့တဲ့နေ့လေးပေါ့...း))
noblemoe said on July 22, 2010 at 8:31 AM
ပျော်စရာကြီး တော်တော်ကံကောင်းတဲ့အကိုကြီးပဲ ဒီလောက်သစ္စာရှိရှိနဲ့မြတ်မြတ်နိုးနိုးချစ်နေတဲ့လိမ္မောရောင်မိန်းခလေးနဲ့ဆုံခဲ့တာ
orange colour အမှတ်တရလေး ရေစက်
Wunna said on July 22, 2010 at 9:28 AM
ဆယ်ကျော်သက် စာရေးဆရာလက်ရာမျိုး ဖြစ်နေတယ် အရင်ဇွန်မိုးစက်လေး...
Anonymous said on July 22, 2010 at 10:08 AM
Shinlay said on July 22, 2010 at 6:49 PM
အမှတ်တရ၊ ကြည်နူးစရာလေးကို ခံစားပြီးဖတ်သွားပါတယ်။
ချစ်ကြည်အေး said on July 22, 2010 at 8:35 PM
ညီမဇွန်...အကြာကြီး ရှိခဲ့ပြီပဲနော်...မေ့ပစ်လိုက်လို့ မပြောချင်တော့ပါဘူးလေ...
အင်ကြင်းသန့် said on July 22, 2010 at 9:52 PM
အင်း....အင်း....ကြည်နူးစရာလေးပါပဲ။ ကောင်လေးဘက်က ခံစားရေးသွားတာကိုတော့ သဘောကျမိတယ်။
ခိုင်နုငယ် said on July 23, 2010 at 4:19 PM
အိန္ဒြာ said on July 23, 2010 at 11:52 PM
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) said on July 24, 2010 at 10:41 PM
မိုးခါး said on July 27, 2010 at 8:29 AM
ဇာတ်လမ်း တပုဒ် ကြည့်နေရသလိုပဲး))
အမြဲ ပျော်ရွှင် ချမ်းမြေ့နေစေဖို့ ဆုတောင်းပါတယ်နော် အစ်မး))
Rita said on July 30, 2010 at 7:32 AM
ဘဝမှာ မတတ်နိုင်တာတွေ အများကြီးပဲနော်
Mogok Thar said on August 1, 2010 at 3:04 AM
ကျွန်တော့်အတွက်ကတော့ 22ရက်နေ့တိုင်းဟာ ကျွန်တော့်နှလုံးသားမြှုပ်နှံရာ မှတ်တိုင်သင်္ချိုင်း တစ်ခုသာ....။
နှင်းပွင့်ဖြူ said on August 11, 2010 at 11:59 AM
Romantic ဆန်ဆန်လေး ရေးထားတာ..
espaniage said on August 11, 2011 at 11:52 PM
as from the guy's side, it'sayoung blood when he met this girl. it'savery neatly written style to reflect suchaboy's age and thought. this style of story telling reminds me of Sa Yar Mya Than Tint's "Lay Lwint Thu" which was translated from "The Catcher in the Rye" ...